Ball Valve, Check Valve, vavahady vavahady - Newsway
VALVE vita amin'ny vy
Manokana izahay amin'ny valve ball, valves vavahady, valve check, valvelobe globe, valves lolo, plug valves, saringan, valves control. Products
API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Raha mila ny mari-pankasitrahana izahay dia mifandraisa anay sales@nswvalve.com )
Indostrian'ny pulp sy taratasy
KIMIA sy PETROCHEMIKA
CRYOGENIKA SY LNG
SAKAO SY GAS
PULP INDUSTRIES SY PAPER
Newsway Valve Co., Ltd. dia mpanamboatra valves indostrialy matihanina sy mpanondrana mihoatra ny 20 taona, ary manana 20 000 workshop atrikasa voarakotra. Mifantoka amin'ny famolavolana, famolavolana, fanamboarana izahay. Newsway Valve dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ISO9001 ho an'ny famokarana. Ny vokatray dia mitazona rafitra famolavolana fanampiana amin'ny alàlan'ny solosaina sy fitaovana informatika be pitsiny amin'ny famokarana, fanodinana ary fanandramana. Manana ny ekipan'ny maso izahay mba hifehezana tsara ny kalitaon'ny valves, ny ekipa mpanara-maso anay dia manamarina ny valva hatramin'ny fandefasana voalohany ka hatramin'ny fonosana farany, manara-maso ny fizotrany rehetra amin'ny famokarana. Ary izahay koa dia miara-miasa amin'ny sampana fanaraha-maso fahatelo hanampiana ny mpanjifanay hanara-maso ny valves alohan'ny fandefasana.
MANUFACTURER VALVE PROFESSIONAL SISTEMA FIVORIANA QUANLITY ISO9001 Ekipa PROFESSIONAL TAORIAN'NY KOMITITRE amin'ny famarotana
Mpanamboatra valizy matihanina
Newsway Valve Company dia niasa tamin'ny famokarana valva nandritra ny 20 taona mahery ary manana traikefa manan-danja amin'ny famolavolana sy famokarana valva. Ny orinasanay dia mitazona ny famokarana sy ny fitaovana fanodinana tsy tapaka havaozina mba hahazoana antoka ny vokatra sy ny fahombiazan'ny fikarakarana vokatra.
Rafitra fanaraha-maso kalitao henjana
Araka ny rafitra fitantanana fanaraha-maso kalitao ISO9001, ny orinasa Newsway Valve dia mifehy fatratra ny dingana rehetra manomboka amin'ny fanoratana valva ka hatramin'ny milina mankany amin'ny fivoriambe, amin'ny fanaovana hosodoko ary amin'ny fonosana mba hahazoana antoka fa ny valves nalefa avy tao amin'ilay orinasa dia 100% no mendrika.
Newsway Valve Company dia manana departemanta famokarana, sampan-draharaha teknika, departemanta fivarotana, sampana kalitao, departemanta antontan-taratasy, departemanta ara-bola ary departemanta aorian'ny varotra mba hanompoana ny mpanjifa tsaratsara kokoa sy haingana kokoa.
Fanoloran-tena aorian'ny varotra
Nampanantena ny Newsway Valve Company fa: Raha mahita olana amin'ny kalitaon'ny vokatra ny mpanjifa dia hanampy ny mpanjifa hanome serivisy fanamboarana na fanoloana maimaimpoana izahay. Ampio ny mpanjifa hiatrika olana haingana